Iingcamango zeGumbi le-Psychedelic Iingcamango - Ngaphakathi Design Styles
Iingcamango zeGumbi le-Psychedelic Iingcamango
Umhlobiso wegumbi le-Psychedelic umele inkcubeko kunye nendlela yokuphila evela kwixesha elidlulileyo elihlala lisasebenza nabantu namhlanje-ukusuka kumahipsters amancinci ukuya kwiihippie ezindala. Awudingi iziyobisi eziguqula ingqondo ukuze uqonde ubuchule kunye nembonakalo yobugcisa efumaneka kwi-décor ye-psychedelic; yinto efanelekileyo yendalo kwabo banomoya wokungakhathali kunye neendlela zokuphila ezingaqhelekanga.
imibongo yosuku loomama abadlulayo
Ukudala Igumbi le-Psychedelic
Ukuhonjiswa kwe-Psychedelic kunxulumana kakhulu nobugcisa bendabuko kunye namagumbi ahonjiswe ngemvakalelo ye-bohemian. Umxube we-eclectic wamalaphu aqaqambileyo, anemibala, ifanitshala epeyintiweyo, kunye nokuziphatha okanye ii-accents zesizwe zibeka ithoni efanelekileyo yegumbi le-psychedelic. Hlanganisa nezibane ezomeleza iimood kunye nezinye izixhobo zehippy kwaye uya kuba nendawo emnandi.
Iingcebiso ezili-12 zokuhombisa kwigumbi lendlu yaseManhattan
Ukuhombisa i-Dragonfly-Imixholo yeDecor yeKhaya lakho
Amakhethini aBhedi eminyango: Izitayile, iingcebiso kunye nezikhokelo
Yongeza ubume, umbala kunye nepateni emgangathweni kunye neetali zebhogi. Sebenzisa umbhoxo omnye njengesithethi okanye ugubungele umgangatho ngeerugs ezininzi ezigqagqeneyo ezinemigca emibalabala, i-zig-zags, ikat okanye iipateni zepatchwork. Ii-rugs ze-Kilim kunye neerugs zaseburhulumenteni ezinesiphatho, ukubukeka kweediliya zilungile kodwa unokuxubeka kwimibala enemibala enemibala yomhlaba owamkelekileyo kwiinyawo ezingenanto okanye uhleli. Qiniseka ukuba ubopha imiphetho yeentsalela zekhaphethi ukuze ubanike ukujonga okugqityiweyo.
Fumana iiragi zesitayile se-bohemian apha:
Ukuhonjiswa kweBurke -Iimbumbulu ezinemibala emininzi, iipateni zekat, uyilo lwejiyometri
IChim.com -Ukukhetha okukhulu kweerubhi zekilim zesizwe, iirugs ezigcweleyo, iipatchwork, kunye neerhasi zaseTurkey
Yenza indawo efanelekileyo yokuhlanganisana kwigumbi lokuhlala, kwigumbi losapho, emhadini, okanye kwigumbi elingaphantsi ngokusasaza imithwalo ejikeleze itafile yekofu ephantsi okanye isofa yecandelo okanye isitulo sebhentshi. Iipoufs zaseMorocco zinokusetyenziselwa iitafile ezincinci okanye izihlalo ezongezelelweyo kwaye zilunge ngokugqibeleleyo ngesitayile se-bohemian. Izambatho zase-East Indian, ii-cushions, kunye neepillow zinemibala eqaqambileyo eneenkcukacha ezimfakamfele kunye neepateni ezisebenza kakuhle.
Tsala umbala omnandi kwilaphu okanye ipateni yombhoxo eludongeni okanye ubuncinci eludongeni olugqithisileyo olufana neturquoise, bomvu obomvu, ikorale okanye itangerine. Paint iibhodi zesampulu ezimbalwa kwaye uzihambise kwigumbi iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokwenza ukhetho lokugqibela. Iipateni zeJometri okanye ezingaqhelekanga zephepha lodonga kunye nokuziva ngathi kudibene kakuhle kunye neepateni zemigca, imiqamelo kunye neethayile.
Indawo yokuqonda, yokucamngca kunye nokuphumla
Ngelixa kungekho kuluphika unxibelelwano kwiziyobisi kwi-décor ye-psychedelic, inokunxulumana nokwanda kwengqondo ngokucamngca nangakwindlela yokomoya. Mfusa ngu umbala oyimfihlakalo ekhuthaza ukuqonda ngokomoya kunye nobuchule bokuyila.
Umthunzi weetoni ezinamatye anqabileyo, njenge-amethiste okanye umbala omfusa ngokunzulu, wenza ukhetho olugqwesileyo kwigumbi lokulala eliphefumlelweyo, umhadi okanye igumbi lebhonasi elinikezelwe kucamngca.
Cinga nge-indigo kwisibhakabhaka sasebusuku ukuziva kuphahla kwigumbi elinye.
Kwigumbi lokulala, gcina iprofayili esezantsi kunye nesitayile sebhedi kunye neebhutsi zomaleko kunye neekhutsi phezu komgangatho.
Ukuhonjiswa kweDonga kunye nophahla
Hlanganisa ii-tapestries ezimibalabala ezindongeni ezibonisa ubumnandi bomhlaba, imibala ye-tie-dye, iipateni ezimangazayo, i-mandalas kunye neempawu zesibhakabhaka okanye zokomoya. Iimpawu zoxolo, amakhowa, iisimboli ze-yang yang, kunye neentyatyambo ziyilo oluqhelekileyo. Idrafti yelaphu okanye uxhome ii-tapestries zekotoni okanye zisophahleni
Amakhandlela athontswayo kwiibhotile zii-boho hippy, ngakumbi ngokutshintsha kwamakhandlela okanye i-neon wax evutha phantsi kwezibane ezimnyama. Basebenzise njengamagqabantshintshi anemibala kwikofu okanye kwiitafile zokuphela okanye wenze isibingelelo esincinci ngamakhandlela okutshisa kunye nomfanekiso oqingqiweyo kaBuddha wokucamngca. Phosa isitya sokutshisa isiqhumiso seswekile kwaye uxhome abambalwa abaphuphayo kwaye unokuba usisihippie.
Ivenkile yeTrippy.com Unokhetho olukhulu lokuhonjiswa kubandakanya iitapestries, iiposta, ukubamba amaphupha, iitrayi, iziqhumiso, iingubo, iikhethini, iwotshi, izibuko, nokunye okuninzi.
Nge Ivenkile yeeHippie , uyakufumana iintlobo ezahlukeneyo zamaphepha, iiposta, amakhandlela e-drip, i-catcher, i-burner burners kunye ne-window stickers.
Izibane ze Fairy okanye izibane zomtya ezixhonywe ngasemva kwelaphu, zibotshwe iisilingi kunye neendonga, okanye zidityaniswe nefenitshala zongeza ukuziva okuyimfihlakalo kwigumbi lokulala okanye kwindawo yokuhlala izihlobo. Kwigumbi lokuhlala okanye kwigumbi losapho, xhoma isibane sependenti saseMoroccan ukuze wenze umzekelo ontsonkothileyo ezindongeni nasesilingini xa ukhanyisiwe.
Khuthaza imvakalelo yengqondo kunye nezibane ze-lava okanye izibane zeplasma ezibekwe kwiishelufa zodonga, iitafile zokuphela, iityesi zeencwadi okanye abanxibayo.
Uyilo lwe TAZI Unokukhetha okuhle kokuxhoma iilanteni zeMoroccan.
ILava Lamp.com unikezela ngobukhulu obahlukeneyo bezibane zelava; ungaphuthelwa yingqokelela yeColormax.
Uyilo lwePlasma ye-Aurora inezibane zeplasma zomhlaba.
Faka umboniso wokuKhanya okuMnyama
Uninzi lobugcisa be-psychedelic kukukhanya kokukhanya okumnyama, okunika ubugcisa bodonga olunye uluvo lwehlabathi xa luboniswa phantsi kokukhanya kwe-ultra-violet. Amacwecwe e-Florescent kunye neepowusta zibonakala zihamba kakuhle ngokuchasene nemvelaphi emnyama, zenza iindonga ezimfusa okanye isilingi esimnyama esimnyama. Unokunciphisa umda wokukhanya okumnyama kwinxalenye yegumbi.
Izibane ezigqibeleleyo zokuSebenzisa
Uhlobo olulungileyo lwe izibane zokukhanya ezimnyama Ukuthenga ukudala iziphumo ezikhanyayo ngokwenene zizibane zeetyhubhu ezibizwa ngokuba zibane zibane eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ipeyinti yomgubo ngaphakathi ngaphakathi kwimibhobho yenzelwe ukukhupha ukukhanya kwelanga elide le-UV ngelixa ityhubhu yenziwe kwiglasi ekhethekileyo ebizwa ngokuba yiglasi yeWood, ecoca uninzi lokukhanya okubonakalayo. Izibane ezimnyama ezihamba rhoqo ezihamba ngombala nazo zisebenza kakuhle kwaye uninzi lwenzelwe ukudibanisa kunye.
Nge Ukukhanya komlilo wasendle kunye neZiphumo eziBonakalayo , Uyakufumana izibane zetyhubhu emnyama emnyama engabizi kakhulu kodwa izixhobo ezixhonyiweyo zithengiswa zodwa.
Gquma isilingi kwigumbi lokulala ngeetheyiphu zengqondo okanye iipowusta ke xa ulele ebhedini, imibala eqaqambileyo eqaqambileyo, iisimboli kunye neepateni zigcwalisa ingqondo yakho. Yongeza iinkwenkwezi zesilingi ezikhazimlayo ukwenza imifanekiso ibonakale idada esithubeni.
Yenza igalari yobugcisa eqaqambileyo ekoneni, kwi-nook, okanye kwinxalenye yodonga kude nezinye izibane kwigumbi. Ukuba unamabhongo ngokwenene, gubungela igumbi lonke okanye igumbi elingaphantsi kubugcisa bokukhanya obumnyama. Zama igalari epasejini kwaye uxhome ikhethini enamacala amancinci emnyango.
I-DIY Graffiti Wall
Ipeyinti udonga olugqithisileyo lube mnyama okanye wenze ulwahlulo lwegumbi lokusonga ngokubamba iipaneli zeplywood ezintathu ngokudibeneyo. Ipeyinti iplywood emnyama ngaphambi kokudibanisa iipaneli. Sebenzisa ipensile kunye nepeyinti ye-neon ye-florescent ukwenza udonga lwe-psychedelic graffiti. Jonga uyilo olunjengamakhowa, iimpawu zoxolo, iinkwenkwezi, iintyatyambo ezinobuso obunoncumo, amabhabhathane, ubuso obunoncumo, kunye neempawu ze-yang yang.
Fumana izixhobo zokukhanya ezimnyama, ipeyinti, kunye nokuhonjiswa kwi:
Mnyama.com Inokhetho olukhulu lokuhonjiswa kokukhanya okumnyama okusebenzayo kubandakanya ii-tapestries, iiposta, amakhandlela, iwotshi kunye namakhethini amaso, ukongeza ipeyinti ekumgangatho ophezulu kunye nezibane.
Ingxelo.be inikeza izibane ezimnyama ezingadibaniyo ezimnyama, ilaphu lokukhanya elimnyama elisebenzayo, ipeyinti ye-acrylic kunye ne-tempera, ii-tapestries, amakhandlela e-drip, amakhethini amaso kunye nokukhetha okukhulu kweenkwenkwezi ezikhanyayo, amabhabhathane, amakhowa, iimpawu zoxolo kunye nabafokazi.
Ukuba uyayithanda i-boho hippy vibe kodwa ungafuni ukwenza igumbi elipheleleyo kule nkangeleko, yongeza nje enye okanye ezimbini kwi-psychedelic touch.
Yenza indawo ejolise ekubambeni ngombala ngombala odayiweyo okanye uxhome iteyiphu yengqondo yengqondo eludongeni ngasemva kwebhodi yentloko.
Sebenzisa ilaphu elinemibala engcangcazelayo, iphepha elinombala obotshiweyo, okanye iteyiphu enkulu yokwenza i-canopy elula ngaphezulu kwebhedi, uyincamathisele ngamagwegwe okanye ngentonga yesilingi intonga yamakhethini.
Yenza ipeyinti yebhodi yesitayile sobugcisa obunemibala okanye isitulo.
Isakhelo se-psychedelic tapestry kwaye uyixhome njengobugcisa bodonga ngaphezulu kwesofa.
Sasaza imithwalo enemibala ekhaliphileyo kwiipateni ezixubileyo kwiisofa nakwizitulo. Faka isibane setafile, isibane somgangatho okanye isibane sependenti esinomthunzi we-retro.
Yongeza indawo yesitayile se-bohemian kunye nokutsala umbala kumbhoxo eludongeni lwesandi.
KwiDen okanye kwiOfisi
Paint idesika enombala wasendle.
Hlanganisa udonga lwegalari yeeposta zeposta okanye isakhelo nje kwaye uxhome ezimbini okanye ezintathu.
Sebenzisa i-ashtray yeshukela yeshukela kwiipapliplips, faka i-sugar burner burner burner kufuphi, kwaye uxhomeke iwashi yekhanda leshukela eludongeni.
Ukuhonjiswa Awunakho Ukungahoyi
Nokuba ligumbi liphela okanye ii-aksenti nje ezimbalwa, ukuhonjiswa nge-psychedelic kunqabile ukuba kungabonakali. Ukuba unecala lokuyila, elinobugcisa, ungayenza ngokwakho.
Abantwana' Iincwadi Iivenkile Eyabantu Izacholo Ukuhlala In San Francisco Imihla Yokuzalwa
Umyili Ingxoxo Irings
kuchaphulo olu malunga nabahlobo abanjengosapho
ukhe acinge ngam
ezona zibonelelo zilungileyo zokunikela ngemoto
enkosi ileta emva kokugxothwa
Okhohlisa amadoda okanye abafazi abaninzi
indlela yokususa amabala egazi amadala
indlela ukwanga okokuqala inyathelo ngenyathelo